Lixabiso Horizontal isichumisi Umxhubi Machine Suppliers kunye Factory | YiZheng
Horizontal isichumisi Umxhubi Machine sisixhobo esibalulekileyo sokuxuba kumgca wokuvelisa isichumisi. Ibonakaliswe ngokusebenza okuphezulu, isidanga esiphezulu se-homogeneity, ulungelelwaniso oluphezulu lomthwalo, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kunye nongcoliseko olusezantsi.
Yintoni umatshini oxutywe nesichumisi sokucoca?
Inkqubo ye- Horizontal isichumisi Umxhubi Machine ineshafu esembindini enamacangci ajikeleziweyo ngeendlela ezahlukeneyo ajongeka njengeeribhoni zentsimbi esongelwe eshafini, kwaye iyakwazi ukuhamba kumacala ahlukeneyo ngaxeshanye, iqinisekisa ukuba zonke izithako zidityanisiwe. Horizontal isichumisi Umxhubi Machine unokuhamba nezinye izixhobo ezincedisayo ezinje ngebhanti yokuhambisa okanye yokuhambisa ibhanti ethambekele kuyo yonke imveliso yemveliso yesichumiso.
Umxhubi oxutywe nesichumisi oxwesileyo usetyenziselwa ntoni?
Ukuxuba yenye yemisebenzi ebalulekileyo kuyo yonke imveliso yesichumiso. Kwaye kunjaloHorizontal isichumisi Umxhubi Machine ithathwa njengesixhobo esisisiseko nesisebenzayo sokuxuba igranules eyomileyo, umgubo kunye nezinye izongezo. Umxhubi oxwesileyo wesichumisi usetyenziselwa ukuxuba izinto kakuhle kunye nenye okanye ezingaphezulu izinto ezincedisayo okanye ezinye izongezo kwinkqubo yemveliso yezichumiso zomgubo okanye inkqubo yokuvelisa isichumiso se pellet.
Ukusetyenziswa kwe Horizontal isichumisi Umxhubi Machine
Inkqubo ye- Horizontal isichumisi Umxhubi Machine isetyenziswa ngokubanzi kwi-solid-solid (izinto zomgubo) kunye ne-solid-fluid (izinto zomgubo kunye nezinto ezinamanzi) ezixubeneyo kwicandelo lezemveliso yezichumisi, ishishini lamachiza, ikhemesti, ishishini lokutya, njl.
Izinto eziluncedo ze Horizontal isichumisi Umxhubi Machine
(1) Ukusebenza okuphezulu: Jikelezisa ngokubuyela umva kwaye ulahle izinto kwii-engile ezahlukeneyo;
(2) Ukufana okuphezulu: Uyilo oluhlanganisiweyo kunye nemingxunya ejikeleziweyo izaliswe yi-hopper, ukuxuba ukufana ukuya kuthi ga kwi-99%;
(3) Intsalela esezantsi: Kuphela sisithuba esincinci phakathi kwemingxunya kunye nodonga, uhlobo oluvulekileyo lokuvula umngxuma;
(4) Uyilo olukhethekileyo lomatshini lunokuchitha izinto ezinkulu;
(5) Inkangeleko elungileyo: I-weld epheleleyo kunye nenkqubo yokupolisha yokuxuba i-hopper.
Horizontal isichumisi Umxhubi Umboniso wevidiyo
Horizontal isichumisi Umxhubi Model Ukukhetha
Zininzi Horizontal isichumisi Umxhubi Machine iimodeli, ezinokuthi zikhethwe kwaye zilungelelaniswe ngokweemfuno zomveliso. Iiparameter zayo eziphambili zobugcisa zibonisiwe kule theyibhile ingezantsi:
Umthamo （t / h）
Isantya (r / min)
IYZJBWS 600 × 1200
Egqithileyo Umatshini weSixube seShaft esiphindwe kabini
Okulandelayo: Disc Umxhubi Machine
Intshayelelo Yintoni iRotary Drum Sieving Machine? Umatshini wokujikeleza i-Drum Sieving Machine usetyenziselwa ukwahlulwa kweemveliso ezigqityiweyo (umgubo okanye igranules) kunye nezinto ezibuyiswayo, kwaye unokuqonda ukuhlelwa kweemveliso, ukuze iimveliso ezigqityiweyo (umgubo okanye igranule) zihlelwe ngokulinganayo. Luhlobo olutsha ...
Intshayelelo Yintoni i-Groove Composting Turner Machine? Umatshini ozihambelayo weGroove Composting Turner Machine sisixhobo sokuqala sokuvumba, sisetyenziswa ngokubanzi kwizityalo zezichumiso zezinto eziphilayo, isityalo sesichumisi esimbaxa, udaka kunye nesityalo senkunkuma, ifama yezolimo kunye nesityalo se bisporus sokubila kunye nokususwa ...
Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine Fertil ...
Intshayelelo Yintoni Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine? I-Rotary Single Cylinder Drying Machine ngumatshini omkhulu wokuvelisa osetyenziselwa ukomisa amasuntswana afunxa isichumiso kushishino lokwenza isichumiso. Sesinye sezixhobo eziphambili. Umatshini weRotary oSodwa weSilinda wokuCoca umatshini kukomisa amasuntswana omgquba wesichumiso nge-wa ...
Intshayelelo Yintoni iAngle eNkulu ethe nkqo ecaleni kweBelt Conveyor esetyenziselwa yona? Esi sigqeba sikhulu se-Angle Incline Belt Conveyor silungelelene kakhulu kuluhlu lwebhodi yeemveliso ezihamba simahla ekutyeni, ezolimo, amayeza, izithambiso, ishishini lamachiza, njengokutya okulula, ukutya okubandayo, imifuno, iziqhamo, i-confectionary, imichiza kunye nokunye. ..